एमाले कै स्थायीसमिति मा बिबाद कसरी होला बामगठबन्ध? – www.agnijwala.com
एमाले कै स्थायीसमिति मा बिबाद कसरी होला बामगठबन्ध?
काठमाडौं ११ माघ – राप्रपाबाट भर्खरै एमाले प्रवेश गरेकी कोमल वलीलाई राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनाएको विषयलाई लिएर एमालेका दुई नेताबीच झण्डै कुटाकुट भएको छ ।
उम्मेदवार टुंगो लगाउन अध्यक्ष केपी ओली निवकासमा बसेको एमाले स्थायी कमिटि बैठकमा पुरानालाई स्थान नदिएको र नवप्रवेशीलाई महत्व दिएको भन्दै योगेश भट्टराई र धनश्याम भुसालले नोट अफ डिसेन्ट जारी गरेपछि विष्णु पौडेल जंगिएका थिए ।
पौडेलले भट्टराई र भुसालले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको विषयलाई लिएर पौडेल गर्जिन सुरु गरेका थिए । पौडेलले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि पौडेल भट्टराई र भुसाललाई इंगीत गर्दै आफु इन्चार्ज भएपछि आफ्नो निर्णय लागु हुने भन्दै अरुलाई चासो नलिन आग्रह गरेपछि बैठकमा उनीहरुको विवादले उग्र रुप लिएको थियो । बैठकमा पौडेलले भट्टराईलाई इगिंत गर्दै भने,‘ ५ नम्बर प्रदेशको इन्चार्ज म हो । मैले जे भने त्यो हुन्छ । अरुले चासो धेरै नराखेको राम्रो ।’
नोट अफ डिसेन्ट लेखेका भट्राईले पौडेललाई मुखभरीको जवाफ फर्काए । ‘ ‘हामीलाई पनि थाहा छ, कसको कनेक्सन कहाँ छ भनेर । लोकमान कार्कीदेखि एनसेलसम्म कहाँ–कहाँ के भएको छ सबै थाहा छ । हामीले पनि हिसाब राखेका छौं । ठूलो कुरा नगरे हुन्छ । एक दिन सबै बाहिर आउँछ । सबै हिसाब असुलिन्छ’, भट्टराई बनाई उद्दृत गर्दै स्रोतले काठमाण्डुटुडेसँग भन्यो ।
बैठकमा सहभागीहरुले संयमित हुन आग्रह गरेपछि उनीहरुको विवाद साम्य भएको थियो ।
एमाले स्थायी समितिको बैठकले ५ नम्बर प्रदेशबाट रमष्ट्रियसभा सदस्यमा कोमल वलीको नाम सिफारिस गरेपछि नेताहरुबीच विवाद बढेको हो । सो विषयलाई लिएर कार्यकर्ताहरुले समेत सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेका छन् ।как дать объявление на авитоandru-ru.facebook.comбесплатный чатобувь норфинсковорода для паэльи купить спб